SAWIRRO: Ander Herrera oo loo doortay Xiddiga Sannadka Man Utd, yuuse abaalmarintaan uga adkaaday, maxaa lagu abaalmariyey Antonio Valencia? | Isha Wararka Ciyaaraha
Home » Horyaalada » SAWIRRO: Ander Herrera oo loo doortay Xiddiga Sannadka Man Utd, yuuse abaalmarintaan uga adkaaday, maxaa lagu abaalmariyey Antonio Valencia?
SAWIRRO: Ander Herrera oo loo doortay Xiddiga Sannadka Man Utd, yuuse abaalmarintaan uga adkaaday, maxaa lagu abaalmariyey Antonio Valencia?
Kubadsameeyaha reer Spain Ander Herrera ayaa ku guuleystay Abaalmarinta Ciyaaryahanka Sannadka ee kooxda Manchester United xilli ciyaareedkaan 2016 illaa 2017.
Codbixinta waxaa laga qaaday taageereyaasha Man Utd, waxayna xiddiga reer Spain ugu codeeyaan Laacibkooda Sannadka inkastoo uu tartan kula jiray Zlatan Ibrahimovic oo 28 gool u dhaliyey Man Utd xilli ciyaareedkaan iyo daafaca dambeedka midig Antonio Valencia.
Herrera ayaa farta laga saaray abaalmarinta Sir Matt Busby Award taasoo sannad kasta la siiyo Xiddiga Ugu Wanaagsan Man Utd, waxayna ka dhigan tahay in xiddig u dhashay dalka Spain uu ku guuleysanayo abaalmarintaan markeedii afaraad oo xiriir ah, sababtoo ah goolhaye David De Gea ayaa abaalmarintaan hantay sannadkii 2014, 2015 iyo weliba 2016.
27 sanno jirkaan ku dhashay Basque, waxay Man United kusoo iibsatay 28 milyan oo ginni sannadkii 2014kii isagoo ka yimid kooxda Athletic Bilbao. Tababarihii reer Holland Louis van Gaal ma uusan aaminsaneyn. Laakiin Herrera wuxuu ahaa xiddiga ugu wanaagsan Man Utd xilli ciyaareedkii ugu horreeyey ee tababare Jose Mourinho.
David de Gea ayaa abaalmarintaan guddoonsiiyey Herrera
Herrera ayaa u sheegay ManUTV: “Sharaf ayey ii tahay inaan ku guuleysto abaalmarintaan sababtoo ah marka aad aragto liiska dadka kusoo guuleystay ayaad dareemeysaa sida ay muhiim u tahay, dabcan sidoo kale waxaa muhiim ii ah inaan abaalmarintaan ka dulqaaday David Dea Gea oo sannadihii dambe iska heystay, balse ay weli sii joogto Spain”.
Ander Herrera oo loo doortay abaalmarinta Sir Matt Busby Player of the Year award
Daafaca dambeedka midig Valencia ayaa loo doortay Ciyaaryahankii Ugu Wanaagsanaa Ciyaartoyda Man Utd (Players’ Player of the Year award). Xiddiga u dhashay dalka Ecuador ayaa door weyn u ciyaaray kooxdiisa ka dhisan Old Trafford xill ciyaareedkaan.
Ugu dambeyntiina, weeraryahanka reer Sweden Zlatan Ibrahimovic kama uusan qeyb gelin xafladdaan sababtoo ah 35 sanno jirkaan ayaa weli kasoo kabsanaya dhaawac jilibka ah.
Juan Mata & Ander Herrera ayaa halkaan ku baashaalaya intii xafladdaan lagu jiray